ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: အသနားခံစာ
Good one too. I like it.;)
Oh!!!! You were late.
We have already sent it to Naypyidaw. It was the same which you mentioned in your post.
Hopefully we will getabig bonus from our brother and sister, friends and parent, colleague and co-worker around country(55 million people).
He' he'... we are sure that we will win some of places such as Insein and Thayarwaddy, Putaoo and Klay.
Member of NNDDFF
Very nice post! It will hit directly to those crabs.
Pity they still did not repent. (Because they have no choice and can't makeaU-turn)
Just read Mya Than Tint's novel about Queen Phua Saw and recall the scene when King NaraThihaPathay asked queen Saw Lone to apologize to him so he can pardon her from being burn alive. What Saw Lone did? She scolded the King and bravely walked toward the cage to be burn alive. These crook are worst thanalady.
ကိုပေါရေးသမျှထဲမှာ ဒီဟာအကြိုက်ဆုံး.. :)
အယ် ဒီလိုရေးထားပေးမှန်းသိရင် တို့တွေခေါင်းစားခံပါဘူးဟယ်။
အဆင်သင့်ယူသုံးပါတယ်။ သိက္ခာကတော့ မရှိတဲ့အပြင် အနှုတ်လက္ခဏာဝင်နေတယ်လေ။ ပိုက်ပိုက်ကတော့ ကိစ္စမရှိဘူး။ ဘဘတွေနဲ့ပေါင်းစားရင် နူးနူးလေးစားရမှာ။
အနည်းဆုံး အကြိမ်ငါးထောင်(ဆင်ဖြူတော်ရုပ်လေးရဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းပေါ့ နီနီလေးလေ)ကျိန်ဦးမှာ
ကိုပေါ ကွန်ပြူတာစာစီစာရိုက် နှင့်မိတ္တူဆိုင်
အသင့်ရိုက်နှိပ်ပြီး စာချုပ်စာတမ်းများ ၊
ကျနော်တို့ လို လူပြိန်းတွေအတွက်တော့ ကြာလေ ဒေါ်စု အမြော်အမြင်ကြီးမှန်း သူ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှန်မှန်းသိရလေပဲ။ အရင်က တခါတလေ ဒေါ်စု့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အစပိုင်းမှာ ဘ၀င် သိပ်မကျချင်ဘူး။
အခုဟော့ဖြစ်နေတဲ့ အာရုဏ်ဦးမှာဖူးသည့်ကြာ နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပျက်နေတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေဘက်ကနားလည်တဲ့သူ ရှုံ့ချတဲ့သူ၂ဘက်ကွဲနေတယ် (ရှုံ့်တွေပိုများ)၊ ကိုပေါရောဘယ်လိုမြင်သလဲခမျ။လည်တဲ့သူလား၊ရှုံ့တဲ့သူလား။လည်တဲ့သူဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှုံ့တဲ့သူဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီးကိုပေါသတ်မှတ်မယ့်အယူအဆကို ပိုစ့် တခုအနေနဲ့ဖတ်ချင်တယ်ဗျိူး။။
For Ko Paw.....
Copy from http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-31-58/2009-09-16-01-33-04/6055-2010-08-04-08-53-57
ပြည်တွင်းမှာအနစ်နာခံအလုပ် လုပ်နေသူတွေ မစော်ကားသင့်ဘူး
4 THUMBS UP, KO PAW!!! YOU ROCK!! :D
ငါလိုးမသား မျိုးချစ် ပြည်တွင်း လာရင် မင်း မအေလိုးတွေက ဖမ်းမှာပေါ့။ ချီးထုပ်ရဲ့ ဘူေ၇ှာရဲ့